Label Die Cutter - C3 Series
Fanapahana fonosana ara-toekarena - ...
Roll Material Cutter - A11 ...
Cutter boaty mitaingina haingam-pandeha haingam-pandeha
Ameida B4 series dia natao ho an'ny doka, famantarana, fonosana ary indostria maro hafa.
Ny rafitra fanapahana nomerika B1 Flatbed dia afaka mahatsapa amin'ny alàlan'ny fanapahana, fanapahana antsasaky, fanosehana, fikosoham-bary, famonoana ary fanaovana akany miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo sy mazava tsara. Amin'ny latabatra conveyor, B1 dia afaka mameno ny sakafo ara-nofo sy manangona amin'ny hafainganam-pandeha haingana. Mety tsara amin'ny fanaovana santionany, hazakazaka fohy ary famokarana betsaka amin'ny indostrian'ny Sign & Graphic, Packaging, Automotive, Gasket.
Ny rafitra fanapahana nomerika B4 dia afaka mahatsapa amin'ny alàlan'ny fanapahana, fanapahana antsasaky, fanosihosena, fikosoham-bary, totohondry ary akany miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo sy mazava tsara.
Mety tsara amin'ny fanaovana santionany, hazakazaka fohy ary famokarana betsaka amin'ny indostrian'ny fonosana, ary manome sosokevitra ny vokatra latabatra miorina mba hifanaraka amin'ny fangatahanao izahay.
Ny andiany B4-L dia natao manokana ho an'ny indostrian'ny fonosana, miaraka amin'ny vidiny mifaninana sy ny habeny mifanaraka aminy.
Ny rafitra fanapahana nomerika B3 Flatbed dia afaka mahatsapa amin'ny alàlan'ny fanapahana, fanapahana antsasaky, fanosotra, fikosoham-bary, famonoana ary fanaovana akany miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo sy mazava tsara. Amin'ny latabatra conveyor, B3 dia afaka mameno ny sakafo ara-nofo sy manangona amin'ny hafainganam-pandeha haingana. Mety tsara amin'ny fanaovana santionany, hazakazaka fohy ary famokarana betsaka amin'ny indostrian'ny Sign & Graphic, Packaging, Automotive, Gasket.
C5 dia milina famonoana dizitaly miaraka amina asa marobe toy ny fanitsiana, famerenana amin'ny laoniny, fikorisana, fanesorana fako, fanapahana lamba tokana, fanangonana. Tsapany fa ny fanapahana horonan-taratasy sy ny fanapahana horonan-taratasy amin'ny fotoana iray dia mora kokoa noho ny fanapahana bobongolo antsy. Ny lohan'ny fanapahana dia afaka manitsy ny elanelana eo anelanelany. C5 koa dia manohana ny rafitra fanaraha-maso buffer marani-tsaina hahatsapa fanapahana mandeha ho azy sy hafainganam-pandeha ..
C3 horonan-taratasy hanakodia marika maty cutter manome ny vahaolana fanapahana ho azy ho an'ny sticker sy ny marika, mifanaraka amin'ny famokarana fohy sy famokarana betsaka. C3 dia afaka mamita ny fanesorana ny fako, ny fikororohana, ny fanangonana ary ny fanosotra amin'ny fotoana iray, ny fanohanana ny antsasaky ny fanapahana ary ny fahatapahana ho an'ny fitakiana samihafa. Samy afaka mampiasa an'io milina io ny fivarotana sy ny fivarotana antsinjarany.
AMEIDA dia nanambatra ny zavatra niainantsika tamin'ny milina fanapahana sy ny tena ilain'ny mpampiasa, manangana fitaomana mahery vaika amin'ny maodelin'ny indostrian'ny akanjo.
A3 mahatsapa ny modely sy ny fanapahana lamina, ataovy mora ny miasa ny fanoloana modely.
Multi-Function Digital Cutter - B8 Series
B8 no vahaolana fanapahana havaozina an'ny B4-izay amidinay indrindra. Ny rafitra fanapahana nomerika B8 dia afaka mahatsapa ihany koa amin'ny alàlan'ny fanapahana, fanapahana antsasaky, fanosehana, fikosoham-bary, famonoana ary fanaovana akany miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo sy mazava tsara.
Miaraka amin'ny stacker (feeder sheet) sy ny rafitra fanangonana, ny B8 dia afaka mameno ny sakafo ara-nofo sy manangona amin'ny hafainganana haingana. Mety tsara amin'ny fanaovana santionany, hazakazaka fohy ary famokarana betsaka amin'ny indostrian'ny fonosana, ary soso-kevitra indrindra fa ny vokatra latabatra miorina.
Ny tsipika tsotra sy malefaka dia tsy vitan'ny hoe miova amin'ny estetika maoderina, fa mifanaraka amin'ny tena ampiasain'ny indostrian'ny mpanjifantsika; ny fitambaran'ny manga, fotsy ary volondavenona, mahatonga ny masinina ho marin-toerana sy mandroso; ary notazoninay tsy niova ny teboka mafonan'ny masinina, ny firafitry ny rafitra ankapobeny natao tsara, ny rafitry ny fitaovana miovaova, ny fahombiazan'ny fanapahana ary ny fikatsahana ny hatsarana amin'ny vokatra Ameida.
Multi-Function Digital Cutter - B4 Series
Miaraka amin'ny stacker (feeder sheet) sy ny rafitra fanangonana, ny B4 dia afaka mamita ny sakafo ara-nofo sy manangona amin'ny hafainganana haingana. Mety tsara amin'ny fanaovana santionany, hazakazaka fohy ary famokarana betsaka amin'ny indostrian'ny fonosana, ary soso-kevitra indrindra fa ny vokatra latabatra miorina.